Mitambo mitatu yekunakidzwa neiri bhiriji mukambani | IPhone nhau
Nhasi rinoita kunge Chishanu, asi handizvo. Izuva riri nani kwazvo nekuti rinotangira vhiki mbiri, zambuko refu remazuva mana iro Svondo rinotevera tichave tichifunga kuti rave pfupi. Ndiani mumwe uye ndiani mudiki anozove nehurongwa hwavo hwatove munzvimbo (yangu ndeyekubvisa pahupenyu hwangu hwakabatana), asi chero zvavari, unogona kuvapfumisa nemitambo yandinokuunzira nhasi.
Kunyangwe iwe uchizopedza svondo iwe wega, neshamwari kana nevana vako, nhasi ndinokuunzira mitambo mitatu mikuru yekuwedzera kunakidzwa. Zvakare, kana iwe uchimhanyisa, iwe unogona achiri kutora mukana weanopa uye wozviwana iwo nemutengo mukuru, uye kunyange wakasununguka.
2 Lily Farm Chipfuwo
Isu tinotanga ne "LIMBO", imwe yeakanakisa indie mitambo yakaburitswa mumakore apfuura, inorumbidzwa nevatsoropodzi nevashandisi; mutambo unotyisa umo iwe protagonist, iwe, unozviwana iwe chaizvo muLimbo uchitsvaga hanzvadzi yako iri pakati penzvimbo ine rima, mhepo inotyisa nemumhanzi zvinobatsira kuwedzera kutya kwako.
LIMBO ine mutengo wenguva dzose we € 4,49 uye kana iwe uchikurumidza unogona kuiwana kwehafu. Zvikasadaro, uchiri mutambo unokurudzirwa kwazvo, asi hauna kukodzera moyo inonzwisisika.
Lily Farm Chipfuwo
Uye kuneavo vane vana vadiki kwazvo kumba, ndinokuunzirai «Lily Farm Animal», a unonakidza, unovaraidza uye unodzidzisa mutambo yakagadzirirwa vana vanosvika makore mashanu ekuberekwa nekutenda kwavanodzidza pamusoro pemhuka, michero, miriwo, vanhu, mota, mapurazi uye zvimwe zvakawanda vasingaregi kutandara kwechinguva.
"Lily Farm Animal" ine mutengo wenguva dzose we € 3,49 uye kana ukamhanyisa unogona kuiwana mahara.
Uye isu tinopera ne «MovieSpirit», uno hausi mutambo chaiwo, asi unonakidza nyanzvi vhidhiyo mupepeti ye iPhone nePadad iyo yaunogona kugadzirisa yako wega mafirimu, kusanganisira soundtrack uye mhedzisiro, nemavhidhiyo ebridge iri.
"MovieSpirit" ine mutengo wenguva dzose we € 10,99 uye kana ukamhanyisa unogona kuiwana mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Mitatu mitambo yekunakidzwa neiri bhiriji mukambani
Apple inongwarira nharaunda kunyange mupakeji yayo
App Store Ads Inosvika Canada, Mexico, uye Switzerland